Gegada Diyaaradaha ee Tweed-New Haven ilaa Tampa Duulimaadyada Avelo Airlines hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Gegada Diyaaradaha ee Tweed-New Haven ilaa Tampa Duulimaadyada Avelo Airlines hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Duulimaadka Avelo Airlines ee tegaya Tweed-New Haven Airport (HVN).
Avelo Airlines waxay adeeg ka bilowday saldhigeeda Xeebta Bari ee HVN Arbacadii la soo dhaafay (Noofambar 3) iyadoo duulimaadkeedii ugu horreysay ku tagtay Orlando. Tampa Bay waa tan saddexaad ee lixda goobood ee caanka ah ee Florida Avelo Airlines waxay ka adeegtaa HVN.
Adeegan diyaaradda Boeing Next Generation 737-700 wuxuu shaqeeyaa Isniinta, Jimcaha iyo Sabtida.
Duulimaadku waxa uu baxaa HVN 2:30 duhurnimo iyadoo imanaysa TPA 5:25 galabnimo
Duulimaadka soo laabanaya waxa ay tagtaa TPA 6:15 pm iyada oo imanaysa HVN 9:00 galabnimo
Avelo Airlines Waxay u kici doontaa meesheeda saddexaad ee Florida maanta laga bilaabo Tweed-New Haven Airport (HVN) - Tampa Bay.
"Waan ku faraxsanahay inaan galabta u ambabaxno goobta saddexaad ee Avelo ee Florida," ayuu yiri guddoomiyaha Avelo iyo maamulaha Andrew Levy. "Waxaan u fududaynaynaa oo aad ugu habboon dadka deggan Koonfurta Connecticut inay tagaan Tampa. Qiimaha hordhaca ah ee aadka u hooseeya, Tampa iyo shanta kale ee qorraxdu ku qooyay Florida meelaha ay u adeegto Avelo ayaa hadda ka qiimo jaban sidii hore.
Adeeggan diyaaradda Boeing Next Generation 737-700 wuxuu shaqeeyaa Isniinta, Jimcaha iyo Sabtida. Duulimaadku waxa uu baxaa HVN 2:30 duhurnimo iyadoo imanaysa TPA 5:25 pm Duulimaadka soo laabanaya waxa ay tagtaa TPA 6:15 pm iyada oo imanaysa HVN 9:00 galabnimo
"Bixitaanka ugu horreeya ee maanta ee ku wajahan Tampa Bay waa guul kale oo xiiso leh oo ku aaddan iskaashiga si degdeg ah u koraya ee aan la leenahay Avelo halkan HVN," ayuu yiri Agaasimaha Fulinta ee Garoonka Tweed-New Haven Sean Scanlon. "Tamarta halkan madaarka iyo bulshada dhexdeeda maalmihii la soo dhaafay waxay ahayd wax cajiib ah markii aan bilownay waa cusub oo firfircoon ee HVN."
Avelo Airlines Adeegga laga bilaabay saldhigeeda Xeebta Bari ee HVN Arbacadii hore (Noofambar 3) iyada oo duulimaadkeedii ugu horreysay ku tagtay Orlando. Tampa Bay waa kan saddexaad ee lixda goobood ee Florida ee caanka ah Avelo Airlines ka adeega HVN. Marka lagu daro Fort Lauderdale (oo adeeg bilaabay jimcihii hore), Orlando iyo Tampa Bay, Avelo wuxuu bilaabi doonaa inuu u duulo Fort Myers, Palm Beach iyo Sarasota maalmaha iyo toddobaadyada soo socda.
Isku soo wada duuboo, safaf dhaadheer, socod dheer iyo saxmad gaadiid oo kala kulma garoommada kale ee ay booqdaan dadka safarka ah ee Connecticut, HVN waxa ay bixisa waayo-aragnimo madaarka magaalada hooyo si fudud oo fudud. U dhowaanshaha HVN ee wadooyin badan oo waaweyn iyo jidadka tareenada ee rakaabka ayaa ka dhigaya garoonka ugu habboon uguna fudud ee Connecticut.
Avelo waa diyaaraddii ugu horreysay ee bixisa duulimaadyo aan joogsi lahayn oo u dhexeeya HVN iyo Florida. Imaanshaha Avelo ee HVN waxa kale oo ay calaamad u tahay balaadhinta adeegga ee ugu weyn ee HVN in ka badan 30 sano. Avelo waxa ay maalgelinaysaa $1.2 milyan si ay gacan uga geysato cusboonaysiinta iyo casriyaynta tas-hiilaadka iyo hawlgallada taas oo qayb ka ah mashruuca guud ee $100 milyan ee HVN. Balaadhinta madaarku waxa ka mid noqon doona Terminal cusub iyo dhabada dayuuradaha oo la fidiyey oo uu hormood ka yahay hawlwadeenka madaarka Avports.
90-kii maalmood ee la soo dhaafay, Avelo waxa ay shaqaaleysiisey in ka badan 85 HVN-based Crewmembers (waxa ay shirkaddu ugu yeerto shaqaalaheeda), oo ay ku jiraan kaaliyeyaasha duulimaadyada, duuliyayaasha, wakiilada adeegga macaamiisha garoonka, doorarka la xiriira hawlaha, iyo sidoo kale maamulayaasha iyo kormeerayaasha. Avelo iyo HVN waxay filayaan inay haystaan ​​in ka badan 100 xirfadlayaal duulimaad oo saldhiggoodu yahay gegida dhamaadka sanadkan.